Après, Avant နှင့်derrière, devant ။ အဘယျသို့သောဤပြင်သစ်ကြားရှိအဓိပ္ပါယ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် preposition ရှေ့ဆက် သူတို့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည် အဆိုပါ subjunctive ?
Après / Avant ပြီးနောက်နှင့်ခင်မှာ = အချိန်သို့မဟုတ် Space ကိုတစ်ဦးအယူအဆသဘောဆောငျ
ငါနေ့လယ်စာမတိုင်မီ / ပြီးနောက်သူ့ကိုအတူတက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်
ပြီးနောက် / သစ်သားမတိုင်မီလမ်းလည်းမရှိ
Derriere / Devant နောက်ကွယ်မှာနှင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌ = Precise Space ကိုတစ်ဦးအယူအဆသဘောဆောငျ
la ကျစ်လျစ်သေးသွယ်ဖြည့်ပါ est သိုလှောderrière l'arbre
la ဓာတ်ပုံ comm tu es ပေါင်းကျစ်လျစ်သေးသွယ်, va devant Camille သွန်းလောင်း။
သငျသညျသေးငယ်များမှာကတည်းကပုံများအတွက်, Camille များ၏ရှေ့မှောက်၌သွားပါ။
le bois, il ya un chemin Derrière
Aprèsနှင့်Derrière Interchange မ Are
ဒါကြောင့်, ငါ၏နှစ်ခုစာကြောင်းများ "après le bois, il ya un chemin" နှင့် "derrière le bois, il ya un chemin" အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအာကာသ-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပေမယ့်တဦးတည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့အတိအကျကိုယုတ္တိဗေဒ Avant နှိုင်းယှဉ် devant သက်ဆိုင်သည်။
Après Que + ဖျောပွသ / Avant Que + Subjunctive
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအချိန်ကိုနားမထောင်တစ်ဦးကအမှားAprès Que + Subjunctive ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား, အပြအဲဒီမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောအသံကြောင့်ပင်ပြင်သစ်လူတို့တွင်တစ်ဦးကအရမ်းဘုံအမှားပါပဲ။ action ကိုတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ့်လျှင်ကျနော်တို့သေးမသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Avant Que အဆိုပါ subjunctive အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ Après Que နှင့်တကွ, အရေးယူပြီးသားရာအရပျကိုယူထားပါတယ်: left မျှသံသယဟာ subjunctive ဘို့မလိုအပ်ဤအရပ်မှရှိ၏။
Après Que + subjunctive ကျနော်တို့ပြီးနောက်အစားကြိယာ၏နာမ်သုံးစွဲဖို့အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မည်ဟုပြင်သစ်စကားကိုနားထောငျဖို့ဒါမကောင်းတဲ့အသံ။ သင် "Avant Que" နဲ့အတူတူလှည့်ကွက်ကိုသုံးပါ et တစ် subjunctive သုံးပြီးရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
je dois တင်သည့်après qu'il အစိတ်အပိုင်း။ (သို့မဟုတ်aprèsသားဦးစီးဌာန)
သူ (သို့မဟုတ်မိမိအထွက်ခွာသွားပြီးနောက်) အရွက်ပြီးနောက်ကျွန်မစတင်ရပါမည်။
je dois တင်သည့် Avant qu'il Part (သို့မဟုတ် Avant သား Department) ။
သူကအရွက် (သို့မဟုတ်မိမိအထွက်ခွာသွားမတိုင်မီ) ရှေ့၌ငါ start ရမယ်
စကားမစပ်ကျွန်တော် (ဒီရုံအင်္ဂလိပ်လို "ဟုအဆိုပါနောက်ကွယ်မှ" ဟုကဲ့သို့အလွန်ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်) ပြင်သစ်တွင် "le derrière" တွေကိုအသုံးပြုလျှင်ပင်, ပြင်သစ်ကလူမှာအားလုံးစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဝိဘတ် "derrière" ကိုအသုံးပြုပါ။ ရုံအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ခန္ဓာဗေဒ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ "နောက်ကွယ်မှ" ကိုအသုံးပြုပါ။
'' Fue 'သို့မဟုတ်စပိန်' 'ခေတ်' 'အဘို့ကိုအသုံးပြုသည်
ပြင်သစ်တွင် "Disparaître" (ပျောက်ကွယ်သွားဖို့) Conjugate လုပ်နည်း
အဆိုပါဂျာမန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို '' ဖြစ်ကာ '' တစ်ဦးရှေ့စာလုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆိုက်ရောက်ရာပြကမ္မကာရက preposition Be နိုင်သလား
ဟောပြောချက်ညွှန်မှတ် - အင်္ဂလိပ်သင့်အကြံပြုချက်များချိတ်ဆက်ခြင်း
"Baigner" (ရေချိုးရန်) Conjugate လုပ်နည်း
(ကိုတိုးပှားဖိအားပေးရန်, ထလော့မှ) "တိုးပွား" Conjugate လုပ်နည်း
ဤတွင် "Haber" နှင့် "Estar" ရဲ့အဓိကခြားနားချက်ကတော့င်
အီတလီကြိယာ conjugation: Usare
ယင်းကြိယာ၏ example sentences သိမ်းဆည်းထားပါ
အီတလီကလေးအမည်များ: V ကို
မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Dormir '' Conjugate လုပ်နည်း
C. Delores Tucker: လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့်
Long Peak, သော့လမ်းကြောင်းဖျေါပွခကျြတက်ပြီး
အဆိုပါ Ultimate ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း
ကို Safe Tree နှင်းလျှောစီးအဘို့ရှစ်သိကောင်းစရာများ
အဘယ်အရာ Aurora Borealis အရောင်များစေတယ်?
ကျောင်းသား Equity နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်မဟာဗျူဟာဆုံးမဩဝါဒပေး
သန္ဓေသားပင်မဆဲလ်သုတေသန Pros & Cons
Pronoms Disjoints - ပြင်သစ်မှနိဒါန်း Pronoun အလေးပေး
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနှင့် Inspiration Pop
Anne Hathaway - ဝီလျံရှိတ်စပီးယားရဲ့ဇနီး
2016 Volkswagen က Passat ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ ACT ရမှတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေလုပ်နည်း